Naaquude 2 jeer lagu afduubay Africa - BBC News Somali
Naaquude 2 jeer lagu afduubay Africa
13 Nofembar 2014
Image caption Kings Nehemiah Okeye waa Engineer Negerian ah oo badmareen ahaa 25 sano. Sawirka waxaa qaadday: Penny Dale
Waxaa markii ugu horeysay la i afduubtay 1-dii Octobar 2010. Burcad badeedda Nigeria ayaa dilay16 shaqaale militery ee ilaalinayay markabkeena. Kaddib waxay soo fuuleen markabka, waxayna qaateen dhammaan wixii aan haysanna, waxkasta oo kalena waa ay burburiyeen.
Waxay noo kaxeysteen keynta halkaasi oo ay nagu haysteen afar maalmood. Way na garaaceen oo nagu durduriyeen, waxay noo sheegeen in aysan u imaan inay na dilaan balse ay doonayeen inay qaataan saliideena. Kaddib markii ay shubteen saliidda markabkeena oo dhan, waa tageen. Xor ayaan noqonay.
In ka yar labo sano kaddib, ayaan la kulmay weerar markale, markan waa burcad Soomaali ah.
Waxaan saarnaa markab Chemica siday, MV Royal Grace, ku dhawaad 150 mile cabirka badda ayaan ka baxsaneyn xeebta Pakistan, waxay aheyd 28 February 2012.
Waxay dhammaan ku dhacday dhaqso. Waxaan ku jiray hoos qolka matoorka markii ku dhawaad 12 burcadbadeed Soomaali ah ay soo koreen jaranjarta. Waxay tooganayeen qofkasta. Waxay qori caaradii nagu qasbeen inaan u jiheyno markabka Soomaaliya. Waxay nagu qaadatay lix maalmood.
Markan gaarnay Soomaliya, burcad-badeedda waxay na weydiisteen inaan la xiriirno milkiilaha markabka si uu u bilaabo wadaxaajoodka madaxfurashada. Burcadbadeeda waxay lahaayeen dhexdhexaadiye gaar ah oo lagu magacaabo Mursal kaas oo Kenya tegi jiray kana imaan jiray bil kasta. Waxaan gacan ka geystay wadaxaajoodka anigoo afka shirkadda ku hadlayay sababtoo ah milkiilaha markabka ayaa ahaa Nigerian.
Ugu horeyn, waxayna weydiisteen $25 Miliyan. Milkiilaha markabka wuxuu sheegay inuusan haysan lacag intaas la eg. Ugu dambeyn waxaan maleynayaa inay ku dhamaatay ku dhawaad $1.5 Million.
Mararka qaar Mursal, wuxuu u dhaqmaayay sida saaxiibkey oo kale. Wuxuu badi i weydiin jiray hadii aan shaqo Nigeria uga heli karo marka madaxfurashada la bixiyo oo nala sii daayo. "waa suurgal inaad baran karto sida wax loo ka xeeyo kaddib aad noqotid darawal Bus Nigeria" ayaan u sheegay. "way ka wanaagsan tahay sidaas shaqada qoriga".
Ugu horeyn burcad-badeeda waxay nagu hayeen buundada markabka. Kaddib waxay noo wadeen meel kale kaddib markii uu dhintay Engieerka kaas oo Nigeria u dhashay saaxiib igu dhawna ahaa.
Burcadbadeedkaa waxay ahaayeen kuwa aad u dandareysan. Mararka qaar way ii xiri jireen sida ri' oo kale. Marna way i garaaci jireen ilaa inta aan ka miirbeelo. "Aan tunno ninkan sababtoo ah waa Nigerian", ayey yiraahdeen. "hadaan garaacno, wuu u sheegayaa milkiilaha markabka, wuuna bixinayaa madax-furashada". Ma aysan garaaceynin Hindida, Bangaldeshka iyo xubnaha shaqaalaha kale ee Pakistaanka ah.
Burcad-badeedda waxay markabka dul keeneen noocyo badan oo kala duwan oo qoryo ah. Doonteena waxay u adeegsanayeen sida gawaarida hubeysan. Mararka qaar waxay i weydiisan jireen inaan adeegsado xirfadaheyga Engineernimo si aan ugu xiro qoryaha waa weyn markabka. Waxay ku toogan lahaayeen qoryahan doon kasta oo kale oo noo soo dhawaata.
Markay xabadaha ridayaan waxay noo sheegi jireen inaan hoos seexanno si xabadaha wiiftada ah aysan noogu dhicin. Marka ay maleeyaan in koox kale oo burcad badeed ah ay qorsheynayaan in ay weeraraan ama ay ka baqaan ilaalada markab ciidamada badda inuu goobta jooga, waxay naga dalbayeen inaan markabka meel kale u kaxeyno. Habeenkii ayaa sameyn jirnay sidaa.
Labo bil kaddib, la haystayaal badan ayaay xanuunsadeen. Burcadbadeeda waxay diyaariyeen in dhakhatar uu markabka yimaado. Waxa uu ka yimid wadan carbeed. Ma garanayo kuu ahaa balse wuxuu ka hadli karay oo kaliya Carabi. Wuxuuna hubiyay dhammaanteen, wuxuuna siiyay inta jiraneyd daawo. Wuxuu ii sheegay in dhiigeyga uu kacsanaa. Tani igama yaabin.
Dhakhatarka ma aheyn shisheeyaha kaliya ee nagu soo booqday markabka. Ajaaniib kale ayaa dalalka carabta kaga imaanayay doonyo yar yar. Waxay imaanayeen labadii bil ee kasta si ay cunto noogu keenaan.
Burcadbadeedka waxay noo sheegeen in dadkan ay siiyeen qandaraas marka ay helaan lacagta madaxfurashadana ay siin doonaan qeyb.
Dhibka ugu badan waxaa igu aheyd cuntada. Burcadbadeedka ma aysan hayn cunada Nigeria. Waxay kaliya oo ay haayeen bur iyo bariis taas oo lahaystayaasha Asia ay isticmaalayeen balse anigu maya.
Burcad-badeedka waxay noo sheegeen inaan aad uga feejignaano cuntada maadama ay yareyd hadii kale waa macluuleynaa.
Mid ka mid ah shaqaalaha hindida ee markabka oo da'yaraa ayaa ahaa xariif. Wuxuu awooday inuu ka qarsado mobilkiisa burcadbadeedka. Maalin ayuu ogaaday in cunto-kariyaha burcadbadeedka uu ka tagay Chipka taleefoonka sidaa daraadeed wuxuu gashtay taleefoonkiisa. Muddo ayaan awoodnay inaan la hadalno qoysaskeena.
Laakiin way igu adkeyd maxaa yeelay marka aan u sheego xaaskeyga waxa igu dhacay, waa xanuunsatay oo isbitaal ayey gashay.
Maanan awoodin inaan caadi u fakaro inta lay haystay. Waxa kaliya oo raaxo badan iyo dhiiranaan i gelin jiray ayaa ahaa Bible-keyga. Balse burcadbadeedka waa necbaayeen inay i arkaan anigoo aqrinayo maxaa yeelay Muslimiin ayey ahaayeen.
Is afgaran waa
La mid ayey aheyd markaan isku dayo inaan la hadlo. Ma aysan ku hadleynin Ingiriiska sidaa daraadeed markaan ku iraahdo "subax wanaagsan", waxay moodeen inaan aflagaadeynayo.
Sidaa daraaded, waxaan go'aansaday inaan kula xiriiro oo kaliya gacmaha. Way ka gedisnaayeen burcadbadeedkii Nigeria sababtoo ah ugu yaraan waxaan wadaagnay luuqadda.
Waxay gaartay heer aan mooday inaan dhaawacayo nafteyda aan dhimanayo. Waxaan ku fakaray inaan badda ku boodo si aan u qarqo.
Mararka qaar burcadbadeeda waxay i siin jireen caleemaha ay ruugaan oo maskaxda kiciya oo loogu yeero Khat. Markaan ruugay. Waan is ilooway. waxayna iga dhigtay inaan dareemo si aan xor aheyn oo kale. Xitaa waan la qoslaayay burcadbadeedka. Mararka qaar burcadbadeedka waa badnaayeen ilaa 60 ayaa markabka soo koreysay.
Maalinkii lay sii daayay waxay igu noqotay runtii layaab. Ku dhawaad 9pm ee fiidkii ayaa naloo sheegay, "waad bixi kartaan, xor ayaad tihiin". Farxad darteed ayaan wax la cuni weynay, in lagu neefsado hawada bilaashka ah ma aysan fududeyn 13kii bilood ee la haystenimada.
Markii ugu dambeyn aan dalka imid Port Horcourt oo Nigeria ah, waxaan ku qabsanay xaflad aan ugu dabaaldegayno sii daynteenii. Saaxiibadeyda iyo qoyskeygaba way faraxsanaayeen. Balse ma aanan dareemin farxadaas sababtoo ah waxaan ka fakarayay saaxiibkeygii igu dhawaa, Enigineerkii, oo markabka ku dhintay. Waxaan ka fakaraayay qoyskiisa.
Kaddib markii laysii daayay ayaan mid ka mid ah burcad-badeedkii ku helay Facebook-ga. Waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed. Waxaan u qoray waano ah inuu badalo sida uu sameeyo balse marna iima soo jawaabin.
Burcbad-badeedka Soomaaliya waxay u sameeyaan waxa ay sameeynayaan faqriga dalkooda ka jira. Balse faqri ma difaaci karo heerka gaboodfalka ay sameeyeen. Maxaa yeelay school ma aysan gelin, mana aysan maqal school. Waa xayawaan oo kale. Qof tacliin leh wuxuu kari lahaa inuu naftiisa dhigo halka qofka kale uu taagan yahay mana uusan nagula kaceen waxa ay nagu faleen. Balse, Soomalida saas uma fakaraan maadama ay sanado dagaalamayeen
Ma aanan awoodin shaqo inaan helo markii laysoo daayay ilaa March 2014. Waxaan ku leeyahay 14 mushaarkeyga milkiilaha markabka oo aan weli isiin iskaba daa magdhaw. Way igu adag tahay inaan badbaado. Qoyskeyga waxay doonayaan inaan iska dhaafo gelidda badda balse waxaan raadinayaa shaqada ah enigineer badda ah. Waan jeclahay shaqada badda!
Kings Nehemiah Okoye wuxuu la hadlay Marry Harper